Maxay tahay ujeedada safarka Ra'iisul Wasaare Rooble ee Kismaayo?
Rooble oo gaaray Kismaayo
Ra'iisul Wasaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa goor dhaweyd gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka Jubaland, halkaas oo ay ku soo dhaweeyay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam.
Ilo wareedyo ku dhow safarka Ra'iisul Wasaraha ayaa VOA u xaqiijiyay in ujeedada ugu weyn ee safarka Rooble ay tahay sidii dib u heshiisiin looga sameyn lahaa khilaafka gobolka Gedo. Safarka Ra'isul Wasaaraha ayaa sidoo kale qeyb ka ah dardargalinta hannaanka doorashada.
Waa safarkii ugu horreeyay ee Ra'isul Wasaare Rooble uu ku tago Jubaland.
Warbixintan waxaa Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.